Malunga nathi - Xiamen Frand Intelligent Equipment Co., Ltd.
Izixhobo eziZenzekelayo zoNyango lwezoNyango
Umatshini wemaski ogcwele ngokupheleleyo
Ngokupheleleyo auto endlebeni umatshini iwelding
Ngokupheleleyo auto umatshini imaski zonyango ngaphandle iwelding
Umbhobho uqinisa Machine
Umatshini weValve yevili
Tshixa Ukwenza Machine
Umatshini weSocket Assembly
Ukucoca iWambo kunye nokuSoldering Tin Izixhobo
Zenzekelayo Machine Ukuhambisa
Ipakethi kunye umgca wemveliso lwekontraka
Singobuchwephesha bezixhobo ezizenzekelayo eziqhuba umzi-mveliso emibini kwiminyaka eli-10. Patent zobugcisa ezingaphezu kwama-60.
IXIAMEN FRAND EZIQHELEKILEYO ZEZIXHOBO CO., LTD ibekwe kuMgangatho Wesithathu, No. 130 Yokwakha iJiapin Indutrial Park, eGuan Kou Zhong Road, kwiSithili saseJimei, eXiamen Fujian, China.Isebenze kolu shishino kangangeminyaka eli-15. Lishishini lezenzululwazi kunye netekhnoloji yale mihla elikhethekileyo kuphando olwenziwe ngokwezifiso kunye nophuhliso lweeseti ezigqibeleleyo ezikrelekrele zezixhobo, indibaniselwano yomatshini esizisebenzelayo kunye nokusetyenziswa kweenkqubo zerobhothi zeshishini. Okwangoku, ineziseko zemveliso ezine ze-R & D kunye neepatent ezingama-60.Inkampani yethu ikakhulu ibandakanya iinkalo ezintlanu eziphambili zamandla amatsha, iinxalenye zeemoto, ukuchaneka kwe-elektroniki, izixhobo zekhompyuter kunye nokutshixa, kunye nenkqubo yefektri ekrelekrele. Izixhobo zithunyelwa eJamani, eUnited States, eJapan, Thailand, India, njl.
FRAND izixhobo EZIQHELEKILEYO ligxininisa kuphando esingabizi kunye nophuhliso isiphelo ophezulu izixhobo ezikrelekrele epheleleyo, ezihlangeneyo mveliso esizisebenzelayo kunye nokusetyenziswa kweenkqubo iirobhothi mveliso. Ineziseko ezine zophando kunye nophuhliso lwemveliso kunye neepatent ezingama-60. Gxila kuyilo / wenze uvavanyo oluchanekileyo kunye nezixhobo zebandla- usebenzisa ulawulo lwentshukumo olukrelekrele, umbono kunye neerobhothi. Singomnye wabanikezeli abaphezulu bezixhobo ezizenzekelayo kunye nezisombululo zenkqubo yokuzenzekelayo eChina.Iindidi zezixhobo: 1.Hose umatshini esizisebenzelayo umatshini 2.Buzzer indibano umatshini.
4.Ukutshixa umatshini wendibano engundoqo Inxalenye yoxinzelelo lwegeji / yokutshixa umnyango / isitshixo sokuqala-izixhobo ezinxulumene noko: ifayibha ye-optic sensor / umatshini wokuhambisa umatshini wokuncamathela / iipleyiti zokungcangcazela
IXIAMEN FRAND EZIQHELEKILEYO ZEZIXHOBO CO., LTD
ithumbu nokubotshwa umatshini, umatshini wokwenza imaski engalukanga, non elukiweyo ubuso imaski ukwenza umatshini, umatshini wobuso bomaski, umatshini wokwenza imaski, oomatshini ubuso ukwenza imaski,